WARARKA Archive | TOP NEWS
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 23, 2018 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Majaajiliistaha caanka ah ee Sooraan Ismaaciil Sugale ayaa ku aqal galay magaalada Burco, isaga iyo xaaskiisa ayaa waxay dhigteen arooskii ugu cajiibsanaa ee bilowga sanadkaan cusub dhaca. Muuqaal laga soo duubay xafladda arooska oo dadweyne fara badan ay kasoo qeybgaleen ayaa meel fagaare ah uu Sooraan marwadiisa si ugu faraanti geliyay. Lamaanahaan is calmaday ayaa […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 23, 2018 WARARKA
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan degaanka Tareedisho. Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso oo meelaha fog laga hago ayaa xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab waxa ay la eegteen Gaari Cabdi Bile ahaa oo ay saarnaayeen Ciidamo […]
Ku simaha Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna R/wasaare ku xiggeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa maanta si rasmi ah u furay Shirweynaha Qaran ee Siyaasadda Sugnaanta Cuntada iyo Horumarinta Beeraha oo socon doono Muddo Seddex Maalin ah, kaasi oo looga arrinsanayo siddii loo dajin lahaa siyaasadan oo muhiim u ah Wax soo […]
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Madaxda Galmudug ayaa ku guuleystay in ay soo Afjaraan Xiisadii Siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagneyd Magaalada Cadaado. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Cadaado ay noqoto xarunta baarlamaanka Galmudug uu ku shaqeyn doona. Waxaana uu sidoo kale sheegay in reer Cadaado ay kaalin muuqda ka […]
Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi balaaran uu hogaaminayay ayaa goor dhaw gaaray Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud. Madaxweyne Farmaajo, waxaa safarkiisa ku wehlinaya Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) iyo Madaxa Xukuumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo mudooyinka ku wehlinayay safaradii uu ku kala bixiyay Dhuusa-Mareeb, Guriceel, Balanbal iyo Cabduwaaq. […]
DAAWO SAWIRADA: R/wasaare Xasan Kheyre oo gaaray dalka Switzerland
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa gaaray dalka Switzerland , halkaasi oo uu ka qab galaayo shirka dhaqaallaha adduunka. Waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi iyo sidoo kale Soomaalida ku nool dalkaasi. “Aniga iyo wefti ballaaran oo aan hoggaaminayo ayaa gaarnay dalka Switzerland si aan uga […]
DAAWO SAWIRADA: Xaalada Carruurtii dhawaan laga soo furtay Alshabaabka
Kadib hawlgalkii 19-kii Bishan ciidamada dowladda ay ka fuliyeen deegaanka Jiliyaale oo ka tirsan Gobolka Shabellaha dhexe, ayaa waxaa lagu soo furtay hawlgalkaasi caruur dowladda ay sheegtay in Shabaab ay tababarayeen. Caruurtaasi qaarkood ayaa hadda waxaa lagu haayaa Xerada Ciidamada Amisom ee Xalane, waxaana lagu soo waramayaa daryeel la’aan dhanka caafimaadka ah inay haysato caruurtaasi. […]
Ciidamada Koonfur Galbeed oo gacanta ku dhigay Rag Alshabaab ah
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen inta u dhaxeysa degmooyinka Qansax-dheere iyo Bardaale. Maamulka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen Askar iyo Xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Afhayeenka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuuradiin Abuukar ayaa sheegay in howlgal saacado badan qaatay ay ku guuleysteen in ay gacanta ku […]
DAAWO SAWIRADA: Rag Kaarar been ah dadka ku dhacaayay oo lagu qabtay Muqdisho
Maamulka Degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir, ayaa Isniintii shalay Magaalada Muqdisho ku soo bandhigay laba nin, oo sida ay sheegeen ku shaqaysan jiray kaarar been abuur ah. Labadan nin oo lala soo qabtay gaari NOAH ahaa, ayaa lagu eedeeyay inay dadka barakacayaasha ee ku nool Degmada Kaxda u qaybinayeen kaararkaasi, iyagoo markaasi lacago kaga qaadanayay. […]
Amniga wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar oo la adkeeyay
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay wada isku xirta degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka taagneyd xaalaad amni daro oo aad u sareysa, ayaa waxaa arrintaas ka hadashay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Hirshabeele. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Hirshabeele Maxamed Cali Caadle oo warbaahinta la hadlay ayaa faah-faahin ka bixiyay […]